Félix, Mané & Silva oo hoggaaminaya liiska 10-ka xiddig ee sida waalida ah uu sare ugu kacay qiimahooda suuqa tan iyo bilawgii 2019 – Hareerley News
(Yurub) :-Marwalba waxaa jira kor u kac iyo hoos u dhac heerka ciyaartoyda ee kubada cagta ah, waana dhif iyo naadir in la helo xiddig aad u ilaaliyey qaab ciyaareedkiisa waqti aad u dheer, sababtan darteedna waxaan u tixgelinaynaa xiddiga Barcelona ee Lionel Messi iyo weeraryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo inay yihiin laba shaqsi ee nadir ku ah saaxada kubadda cagta.
Bilihii la soo dhaafay, waxaan soo aragnay ciyaartoy badan oo si cad u muuqanayay, waxaana ka mid ah kuwo qiimahooda dhanka suuqa ay sii waali oo rikoor ah ay sarre ugu kacday iyadoo lagu saleynayo qiimaha lagu dajiyay shabakada “Transfermarkt” ee ku tukhasustay arrimahan.
Shabakadan caanka ah ayaa ku tiirsan inay go’aamiso qiimaha uu xiddig kasta ka joogo suuqa kala iibsiga, waxayna ku xiran tahay dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin qaab ciyaareedkiisa uu waqtigaas ku jiro, da’adda, kooxda uu u ciyaaro, dhalashadiisa, xiisaha dhanka warbaahinta, shacbiyada uu ku leeyahay dhanka baraha bulshada iyo qodobo kale.
Xiddiga cusub kooxda Atletico Madrid ee João Félix ayaa ah ciyaaryahanka hogaaminaya liiska xiddigaha ay sarre u kacday qiimahooda dhanka suuqa kala iibsiga tan iyo bilawgii sanadkan 2019, xiddiga reer Portugal ayaa qiimahiisa uu sarre u kacay qiyaarstii 58 milyan euro kaliya mudo 8 bilood gudahood.
Weeraryahanka Liverpool ee Sadio Mané ayaa kaalinta labaad ka galay liiskan, kaddib bandhigii cajiib ahaa ka sameeyay kooxdiisa Liverpool xili ciyaareedkii la soo dhaafay iyo sidoo kale tartanka Koobka Qaramada Afrika, iyadoo qiimahiisii gaarsiisnaa 75 milyan euro uu gaaray 120 milyan oo euros.
Haddaba halkan hoose kaga boggo liiska xiddigaha ay sarre u kacday qiimahooda dhanka suuqa kala iibsiga tan iyo bilawgii sanadkan 2019:
João Félix: qiimaha hore 12 milyan .. qiimaha hadda ah 70 milyan .. cadadka kororka waa 58 milyan.
Sadio Mané: Qiimihii hore waa 75 milyan. Qiimaha hadda uu joogo waa 120 milyan.
Bernardo Silva: Qiimihii hore waa 65 milyan. Qiimaha hadda uu joogo waa 100 milyan.
Alexander-Arnold: qiimahii hore wuxuu ahaa 45 milyan .. qiimaha hadda uu joogo 80 milyan .. cadadka kororka waa 35 milyan.
Viníciusi Jr: qiimihi hore 35 milyan .. qiimahan uu hadda ka joogo suuqa waa 70 milyan .. cadadka kor u kacay waa 35 milyan.
Hudson-Odoi: Qiimaha hore waa eber. Qiimaha hadda uu ka joogo suuqa waa 35 milyan.
Everton Soares: qiimahii hore 7 milyan .. qiimaha hadda 40 milyan .. cadadka kororka 23 milyan.
Jadon Sancho: Qiimahii hore 70 milyan .. Qiimaha hadda 100 milyan .. lacagaha kor u kacay waa 30 milyan.
Rodri: Qiimahii hore waa 50 milyan. Qiimaha hadda waa 80 milyan.
Son Heung-min: Qiimahii hore waa 50 milyan. Qiimaha hadda waa 80 milyan.
Janaraal Cabdelfataax Burhaan oo loo dhaariyay xilka hogaaminta dowladda cusub ee Suudaan
Golaha Ammaanka QM oo ka shiray xaaladda Soomaaliya
Jabuuti oo sheegtay in ay u tartameyso Kursiga QM ee Midowga Afrika siiyay Kenya…